Date My Pet » Dikany ny Mampiaraka sy ny Fifandraisana
Mampiaraka dia iray amin'ireo zavatra izay saika ny olona rehetra manatona amin'ny farafahakeliny fahatsapana tahotra amin'ny nisy fotoana. Sady koa anie, mifandray amin'ny fifandraisana dia sarotra ary indraindray dia tsy hay vao hahalala izay hoe inona no ilay olona dia tena mitady. Ny olona izay mahita ny tenany miady amin'ny fifandraisana matetika mahatsapa fa mitranga daty kokoa hanome azy ireo safidy, ny tenany ihany no mba mahita na dia miady amin'ny olana sarotra kokoa ho vokatry ny ezaka nitombo.
Misy antony maromaro fa mitranga izany, miainga avy amin'ny tsy fahaizana mifandray amin'ny fomba mahomby ho ny hoe olona samy hafa tanteraka indraindray te zavatra amin'ny fifandraisana. Ny vaovao tsara dia tsy voatery ho sarotra izany.
Ny iray amin'ireo fomba handray ny tahotra sy horohoro amin'ny mampiaraka foana ny zava-drehetra dia ny lighthearted tany am-piandohana. Tsy misy ilaina ny ho saro-tahotra na mahatahotra momba ny daty voalohany satria mihitsy izany, daty voalohany. Tsy misy ilaina fa tsy ho daty faharoa raha toa ka zavatra tsy mandeha tsara. Ny daty voalohany tokony ho noraisina ho toy ny fahafahana manana misokatra sy manao ny marina resaka amin'olon-kafa olona mba hahalala bebe kokoa ny momba izany kosa ny olona, ​​ary, hamela izany olona mba hahalala bebe kokoa ny momba anao.
Ny hany zavatra ny olona toa hanamafisana bebe kokoa momba noho ny handeha amin'ny daty voalohany dia mahazo fa daty voalohany. Ny olona sasany dia toa ny tsy misy na inona na inona olana mahazo daty aorian'ny daty. Ny hafa indray mahita hoe sarotra izaitsizy tokoa. Amin'ny toe-javatra toy izany dia mety ho tsara ny nampiasa ny vohikala mampiaraka na handray anjara amin'ny zava-nitranga izay geared amin'ny fanampiana ny olona hahita ny daty. Olona hafa tsy voatery ho mahazo aina amin'ny daty izay efa ankapobeny narindran'Andriamanitra dieny mialoha ary hitady fomba miavaka mba hahazoana antoka fa hahazo ny daty amin'ny nentin-drazana kokoa lamaody. Mino izany na tsy, iray amin'ireo toerana lehibe indrindra hatao hoe avy amin'ny daty any amin'ny alika zaridaina.
Misy zavatra momba ny hividy alika izay manapaka ny ranomandry. Dia mora kokoa ny miresaka amin'ny olona momba ny biby noho izany dia ny hiresaka mikasika ny zavatra hafa. Manome ianao, dia afaka milaza zavatra ho izany olona izany ianao rehefa azo inoana fa tsy ho nanao hoe: na inona na inona no efa anao amin'ny toe-javatra hafa. Rehefa ny zavatra rehetra dia raisina, Tsy mahagaga fa ny alika dia toy izany zaridaina toerana malaza hatao tia olona iray. Manome anao zavatra mba hiresaka momba ary fantatrareo raha angatahana avy amin'ny daty amin'ny alalan'ny olona iray izay manana ny biby any fa ny roa efa manana zavatra iray, fara fahakeliny iombonana.
Ireo teny ireo fa ny fomba ny mampiaraka amin'ny farany ho mifamatotra amin'ny toetra sy ny fomba manapa-kevitra ny handamina azy amin'ny ankapobeny. Izay hanampy anao hanapa-kevitra ny fomba hahazoana daty voalohany. Rehefa tonga any, ny tena zava-dehibe ny mahatsiaro dia ny hitandrina ny resaka mazava sy mamela azy hitondra anao na aiza na aiza dia mety hitondra anareo. Satria mety ho ny tsara fotsiny olona ho anareo amin'ny farany.
Inona no ny vehivavy izy ireo tonga lafatra Te Man?